Okujwayelekile Nezinqubomgomo-G STAR TRADING LIMITED
Ukuqhutshwa ngamandla okuqinile kuhlala kusuka kungqikithi eqinile yangaphakathi.
• Thuthukisa ukuncintisana kwamakhasimende
Amakhasimende ayisihluthulelo sempumelelo yethu. Sabelana ngokuhlangenwe nakho kwethu namakhasimende ethu futhi sibahlinzeka ngezixazululo eziphelele zokufeza izinhloso zabo kahle nangempumelelo.
• Ukuqamba Kuholela Esikhathini Esizayo
• Thuthukisa inani lenkampani
Senza ukukhula okunenzuzo ukuqinisekisa impumelelo esimeme ngokusebenzisa iphothifoliyo yethu yebhizinisi elinganiselayo. Silwela ukuphelela futhi siphishekele ubuhle.
• Ukuqaphela Iphupho Labasebenzi
Abasebenzi abavelele bayisisekelo sempumelelo yenkampani yethu. Isiko lenkampani yethu libonakala ngokuqina, ukwenza izinto obala nokuhloniphana. Sikhuthaza abasebenzi bethu ukuthi bathathe ubunikazi futhi bakhule ndawonye nenkampani.
• Yamukela Isibopho Somphakathi
Sizibandakanya ekukhuthazeni inqubo yentuthuko yezenhlalakahle ngokwenza ngcono, iziphakamiso kanye nobuchwepheshe obusha. Sizibophezele ezindinganisweni zomhlaba wonke, ubuzwe obuhle bezinkampani kanye nemvelo enempilo. Ubuqotho buqondisa indlela esiziphatha ngayo kubasebenzi bethu, esibambisene nabo ebhizinisini kanye nabaninimasheya.
Inqubomgomo yekhwalithi: Passion for Excellence
• Ukubekezelela iZero Ngamaphutha
Imisebenzi yethu iqondiswe ekugwemeni okunzima noma yikuphi ukwehluleka emikhiqizweni yethu nasezinqubeni zethu. Sibheka Iziphambeko Zero njengenhloso yangempela. Sisekela ukuthuthukiswa okuhlelekile kwemikhiqizo nezinqubo.
• Ukwaneliseka Kwekhasimende
Imisebenzi yethu igxile kumakhasimende futhi sizibophezele ekuthuthukiseni ubambiswano oluyimpumelelo kusukela ekuqaleni, kusukela ekusebenziseni ukuphumelela kwephrojekthi nokulawulwa kokuphakelwa kuya ekutholakaleni kwevolumu, sonke isikhathi sokuphila.
• Ukuthuthuka okuqhubekayo
Umgomo wethu kwezamabhizinisi wukuqhubeka nokuthuthukisa ukuncintisana kwethu. Ukuba nokuhlaziywa okujule kakhulu kwezimpande ngokusebenzisa amathuluzi wekhwalithi we-PDCA ne-Six Sigma, ukuthuthuka okusheshayo nokuhlelekile kumkhiqizo nasekuqhubekeni, izindlela ezinhle kakhulu zokwabelana kanye nezinto ezintsha kuyisisekelo sokwanda kwekhwalithi nokukhiqiza.
• Sigqugquzela umoya wokuhweba, wokufukula nokubandakanya abasebenzi bethu ngokuqhubeka nangokuthuthuka nangokuhleleka futhi basebenzise ulwazi lwabo, isipiliyoni namakhono abo.
• Inqubomgomo Yemvelo, Yezempilo Nokuphepha Emsebenzini
• Sinesibopho kwisithembiso esinobungani bemvelo yethu, sihambisana nezimfuneko zomthetho nezinye izidingo, futhi sakha indawo yokusebenza ephephile nenempilo yabo bonke abasebenzi ngaso sonke isikhathi.
• Ukuqinisekisa indawo ephephile, enempilo nethembekile yokusebenza kuyingxenye yesibopho sethu senhlalo.